Nepal, tanin'ny tendrombohitra mahafinaritra sy sary manonofy | Fitsangatsanganana tanteraka
Nepal dia firenena kely miorina amin'ny sisintany eo anelanelan'ny olona goavambe: Shina ary ny India. Miaraka amin'ny faritany be tendrombohitra izay misy ny tampon'ireo Himalaya, Toerana tonga lafatra io raha tianao ny mitsangantsangana na mihanika mba hankasitraka ireo sary manaitra azo jerena avy amin'ny Annapurna na manana Everest.
Saingy, raha tsy manana toe-tsaina tia mitsangantsangana ianao dia manana zavatra maro hafa atolotra anao koa i Nepal. Afaka mitsidika tanàna toy ny ianao Patan, Kathmandu o Bhaktapur, miaraka amin'ireo faritra antenantenany, lapa mirehitra ary tempoly miafina. Afaka mahafantatra koa ianao valan-javaboary voajanahary. Na izany na tsy izany, Nepal dia toerana mety indrindra hahatratraranao ny Nirvana. Raha te hahalala azy ianao dia manasa anao hanaraka anay.
1 Inona no ho hita sy hatao any Nepal
1.1 Everest sy Annapurna
1.2 Valan-javaboary natiora any Nepal
1.3 Kathmandu, renivohitry ny firenena
1.4 Lohasahan'i Kathmandu, lalana iray hafa tena ilaina any Nepal
1.5 Pokhara, tanàna fizahan-tany hafa any Nepal
2 Inona no hohanina any Nepal
3 Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny firenena Aziatika
4 Torohevitra momba ny dia mankany Nepal
Inona no ho hita sy hatao any Nepal
Azontsika atao ny manomboka ny diantsika mankany Nepal amin'ny fampihetseham-batana kely ary avy eo hahafantatra ireo tanàna lehibe sy ireo toerana masiny, tsy manadino ireo faritra voajanahary hafa izay tsy manimba ny an'ny tendrombohitra ny hatsaran-tarehiny.
Everest sy Annapurna
Tsy mila mpihanika tendrombohitra mahay ianao vao hanakaiky ireo zavatra roa manintona an'i Nepal: ny Everest ary ny Annapurna. Afaka miakatra amin'ny tobin'ny toby ny voalohany, izay amin'ny haavo mihoatra ny dimy arivo metatra. Araka ny azonao an-tsaina, tsy fitsangatsanganana mora izany satria maharitra efatra ambin'ny folo andro eo ho eo ary vao mainka mihasarotra izany ny aretina amin'ny haavony. Saingy mora vidy ho an'ny ankamaroan'ny mpitsidika izy io. Ianao dia mila a alalana manokana, saingy mendrika izany ny traikefa.
Azonao atao ihany koa ny mandeha mitsangatsangana amin'ny Annapurna. Miaraka izy ireo dia mamorona làlana dimam-polo amby roan-jato kilometatra azonao atao tsikelikely sy misaraka. Saingy, na izany na tsy izany, hahafaly anao izany Tendrombohitra miavaka eto an-tany.
Etsy ankilany, tadidio foana ny klimatolojia. Ny volana tsara indrindra hidirana amin'ireo tendrombohitra ireo dia ny Oktobra, Novambra ary Desambra amin'ny lafiny iray ary ny martsa, aprily ary mey etsy andaniny. Ny janoary sy febroary dia tsy soso-kevitra noho ny hafanana ambany sy ny lanezy. Raha ny volana jona, jolay, aogositra ary septambra, izy ireo dia vanim-potoana orana izay manasarotra ny zotram-piaramanidina. Na izany aza, marina ihany koa fa amin'ny volana mety indrindra hitsidihana ireo tendrombohitra dia misy mpizahatany maro be te-hanao ny làlany.
Valan-javaboary Royal Chitwan
Valan-javaboary natiora any Nepal
Manana valan-javaboary voajanahary maro ny firenena Aziatika. Afaka mitsidika ianao ny an'i Bardia, miorina atsimo andrefana ary fantatra amin'ny tigra Bengal sy ny voay goavambe. NA ilay any Langtang, izay misy leoparda sy oram-panala. Fa, ambonin'izany rehetra izany, tsy maintsy fantatrao ireo zaridaina roa voatanisa anarana toy ny Lova eran-tany.
Ny voalohany dia ilay avy any Sagarmatha, izay any amin'ny faritr'i kumbu manarona ampahany tsara amin'ny Everest massif. Azonao atao ny manomboka ny fitsidihanao ny ivontoerana mpitsidika, izay ao an-tanànan'i Namche Bazaar. Raha ny momba ny karazana autochthonous dia faritra misy ny antilopa Tibetana.
Ny faharoa, ho an'ny anjarany, dia ny Valan-javaboary Royal Chitwan, any atsimon'ny firenena ary izany dia tahiry mpanjaka. Midika ny anaranao "Heart of the jungle", izay hanome anao ny hevitra momba ny zava-maniry ho hitanao. Mikasika ny biby ao aminy dia manana karazan-karazany tandindonin-doza toa ny rhinoceros indianina na ny Ganges gharial, sauropsid goavambe izay mamela ny hazandrano hihinana azy fotsiny.
Kathmandu, renivohitry ny firenena
Ny fitsidihana an'i Kathmandu dia fidirana amin'ny tanàna misy mponina an-tapitrisany manana làlana tsy feno lalana, fandotoana goavambe ary tabataba maneno. Fa izy io dia mampiasa tsangambato mahafinaritra ihany koa, ny sasany amin'izy ireo dia simban'ny horohoron-tany tamin'ny 2015.
Ny zavatra voalohany tokony hotsidihinao any Kathmandu dia Kianja Durbar, ny atiny izay nipetraka ho fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka. Raha ny tena izy, durbar midika hoe "lapa". Kianja iray sy ireo arabe mifanila aminy no anaovana azy, miaraka amin'ireo tranobeny sy tempoliny. Fa ny zavatra tena mahaliana dia ny tranon'ny Kumari. Io no anarana nomena zazavavy kely voafidy hisolo tena andriamanitra mitovy anarana. Izy dia endrika iray amin'ny kolontsaina Newar ary ho tonga Kumari dia tsy maintsy mandalo fitsapana maro ilay zazavavy kely. Ankoatr'izay, na dia maharitra aza ny anjara asany dia tsy afaka miala amin'ny tempoliny-tranony mihitsy izy.
Tokony ho hitanao ao amin'ny Kathmandu koa ny Boudhanath stupa, iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany ary satro-boninahitr'i Buddha. Isaky ny tolakandro dia mivory manodidina azy ireo moanina avy amin'ny lafivalon'ny firenena mivavaka. Ankoatr'izay, manodidina anao dia misy kafe sy fivarotana asa-tanana Tibetana maro.
Tokony hanatona ny Tempolin'ny bodista Swayambhunath, feno ireo gidro mampiavaka azy, izay World Heritage Site ary miorina eo amin'ny havoana iray izay ahitanao ny tanàna iray manontolo. Farany, tsidiho ny Tempolin'i Kopan sy Phullari ary miala sasatra ao amin'ny Garden of Dreams, valan-javaboary tsara tarehy apetraka eo afovoan'i Kathmandu.
Lohasahan'i Kathmandu, lalana iray hafa tena ilaina any Nepal
Tsy afaka miala eto an-drenivohitra ianao raha tsy fantatrao ilay antsoina hoe Lohasahan'i Kathmandu, izay misy izany ary koa tanàna roa hafa: Patan sy Bhaktapur, ary koa ny totalin'ny tsangambato telopolo amby zato manan-danja tokoa ka voasokajy ho toy ny Toerana misy ny vakoka manerantany.
Patan manana ny fiainanao manokana koa Kianja Durbar, izay tokotanin'ny lapan'ny mpanjaka taloha koa. Izy io koa dia manana tempoly maromaro toa Krishna's, vita amin'ny vato octagonal; ny Degutale o ny Vishwanath, miaraka amin'ireo elefanta vato. Ireo rehetra ireo dia natsangana tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary nosarahina tamin'ny patio izay mitondra ny anarany avy chowks.
about Bhaktapur, heverina ho fifantohana ara-kolontsaina lehibe eto amin'ny firenena, ary manana ny ivon-toerany koa ny kianja durbar. Amin'ny tontolony dia manana fananganana toa ny Lapan'ny varavarankely dimy amby dimampolo, la Varavarana volamena ary ny tempoly toa ny Batsala, miaraka amin'ny lakolosy goavambe, na ny Pashupatinath, miaraka amin'ireo sary sokitra hafahafa hafahafa.
Tsy izy ireo irery no ao an-tanàna. Ny tempoly Changu narayan, dimy kilometatra miala azy, no antitra indrindra amin'ny firenena iray manontolo, raha ny Nyatapola, eo amin'ny kianja Taumadhi ary misy haavo dimy maneho ireo singa, izy no avo indrindra ao Nepal.
Pokhara, tanàna fizahan-tany hafa any Nepal
Ity tanàna ity dia samy manana ny mampiavaka azy tamin'ny teo aloha, ny fizahantany faharoa eto amin'ny firenena. Satria ny fitsidihana azy eo akaikin'ny manodidina azy dia tsy midika hoe mahita tsangambato lehibe (na eo aza ireo), fa Fijery mahafinaritra.
Ao anatin'ny telo-polo kilometatra monja dia miakatra efa ho fito arivo metatra ny tendrombohitra ka lasa lohasaha mahavariana. Misongadina eo amin'izy ireo ilay teo amin'ny ony Gandaki, izay lalina indrindra eto an-tany. Ianao koa dia manana ao amin'ny faritra Poghaka ny farihy pewha, miaraka amin'ny riandrano roa mahavariana izay ny rano, rehefa latsaka tao anatiny, dia nanjavona.
Eo amin'ny nosy kely fotsiny ao amin'ny farihy no anananao izany Tempolin'i Barahi, raha any amin'ny faritra taloha amin'ny tanàna dia ananana ireo Bindhyabasini y Bhimsen. Ankoatr'izay, Pokhara dia iray amin'ireo teboka fanombohana lehibe amin'ny fitsangatsanganana any Himalaya.
Io no tanàna faharoa any Nepal misy mponina ary iray amin'ireo ivon-toeram-pamokarana indostrialy. Izany no antony ilazanay izany aminao. Na izany aza dia iray amin'ireo vitsy izy io fitsidihana lafo amin'ny dianao mankany Nepal satria tsy manana tsangambato miavaka.
Inona no hohanina any Nepal
Ny gastr gastrikan'ny firenena Aziatika dia vokatry ny fitaomana maro. Ny tena manan-danja dia ireo mpifanila vodirindrina aminy karana, sinoa ary Tibetana. Fa misy singa amin'ny sakafo Thai ihany koa. Na izany na tsy izany dia tsy hahita lovia misy hen'omby mihitsy ianao, satria a biby masina ho an'ny ampahany tsara amin'ny mponina ao aminy.
Fa manana ny buffalo sy osy kosa. Fa ny fomba fahandro nasionaly ao amin'ny firenena dia dal bhat tarkari, lovia kôkôla misy lasopy lentil, vary ary legioma nohafoina. Aroso anaty lovia miaraka amin'ireo singa ao aminy manokana ary ampiarahina amin'ny paikady, sokay, voasarimakirana na sakay maintso.
Lovia nentin-drazana iray hafa dia Momo, misy karazana karazan-kena hena amin'ny fomba Tibetana ary misy zava-manitra. Vonona tsara izy ireo miaraka amin'ny buffalo, osy na henan'akoho, fa miaraka amin'ny legioma ihany. Ho azy, chow mein na paty endasina dia avy amin'ny sakafo sinoa.
Ny lovia mahazatra hafa dia kachila na hena voatoto miaraka amin'ny zava-manitra, ny syen na atody nendasina, ny pukala na hena nendasina, ny kwati na lasopy tsaramaso sy ny wo na mofomamy lentil. Raha ny momba ny tsindrin-tsakafo dia mahazatra be izany dhau na yaorta sy ny hampitony, karazan-tsiranoka marikivy.
Loza amina lovia misy saosy
Ary farany, momba ny zava-pisotro, ny dite no firenena. Any amin'ireo faritra be tendrombohitra, mba hanafanana, dia raisin'izy ireo mafy sy miaraka amin'ny dibera izy io. Fa azonao atao koa ny manandrana ny millet na labiam-bary; ny ranom-bary ny siramamy; ny mahi, izay dibera na ny rakshi, millet iray distillate.
Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny firenena Aziatika
Ny firenena aziatika dia manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, ny Tribhuvan an'i Kathmandu, izay sidina tonga avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Rehefa tonga any dia manana dia any amin'ny tanàna hafa ianao. Na izany aza, tsy mamporisika azy ireo izahay satria kely ny seranam-piaramanidina hafa any Nepal ary misy ny sasany atahorana noho ny toetrany be tendrombohitra. Ho fanampin'izany, ny fiaramanidina manao ny zotra dia tsy dia misy kalitao ihany koa.
Mpizahatany maro no aleony mandeha any Nepal avy any New Delhi. Ataon'izy ireo ao Tren hatrany amin'ny tanànan'ny sisin-tanin'i Raxaul, izay mbola an'ny India, ary avy eo maka bisy mankany Kathmandu.
Na ahoana na ahoana, ny fitoriana dia tsy ny akanjo matanjaka an'i Nepal. Tena ratsy ny arabe ary tsy mahazo aina ireo fiara fitateram-bahoaka mampifandray ireo tanàna samihafa satria mora vidy. Misy fiara hafa avy amin'ny orinasa tsy miankina lafo vidy ihany, nefa somary mahazo aina ihany koa.
Na izany na tsy izany dia tsy tokony hatao raha mandeha alina amin'ireny ianao amin'ny alina. Matetika ny mpamily no manararaotra ny lalana tsy misy mihazakazaka ary matetika ny lozam-pifamoivoizana. Toy izany koa, matetika ny halatra valizy, ka manoro hevitra anao izahay mba hidinanao amin'ny «padlock».
Amin'ny lafiny iray, Manakana anao tsy hitondra fiara manofa ny lalàna Nepaley. Ho mora aminao kosa ny manakarama iray miaraka amin'ny mpamily ary tsy dia lafo loatra. Farany, hifindra manodidina ny tanàna lehibe dia manana ny malaza ianao posy na ny pedal na ny herinaratra (ilay antsoina hoe fotoana, izay lehibe kokoa), ary koa ny minibus. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra anao, dia holazainay aminao fa, hialana amin'izy ireo dia tsy maintsy mamely ny valindrihana amin'ny vola madinika ianao.
Kianja Durbar any Patan
Torohevitra momba ny dia mankany Nepal
Raha te hiditra amin'ny firenena Aziatika dia tsy maintsy manana ny pasipaoro manan-kery mandritra ny enim-bolana farafahakeliny. Ary koa, mila a visa manokana inona no azonao zahana -tserasera ao amin'ny Malagasy avy amin'ny Departemantan'ny fifindra-monina na ao amin'ny Consulate of Barcelona. Raha hitsidika ny Himalaya na tendrombohitra hafa ianao dia mila izany koa TIMSfahazoan-dàlana manokana azonao alefa rehefa tonga ianao.
Etsy ankilany, mila miakanjo ianao vaksinina isan-karazany. Ny tena fahita indrindra dia ny typhus, tazo mavo, cholera, MMR, hépatite ary tetanosy. Matetika koa ny tazomoka. Na izany aza, hampahafantatra anao ny GP anao momba izany. Na ahoana na ahoana, ny tolo-kevitray dia ny manakarama a fiantohana fitsangatsanganana tsara mba hikarakarana tsara anao raha sendra lozam-pifamoivoizana na aretina.
Raha ny volam-panjakana dia rupee nepalese. Manoro hevitra anao izahay, alohan'ny handehananao, hanova euro ho dolara ary, indray mandeha eo amin'ny seranam-piaramanidina Kathmandu, dia manaova toy izany amin'ireo vola eo an-toerana. Misy trano fifanakalozana ihany koa any amin'ireo tanàna, fa komisiona fanampiny kosa no ampandoavin'izy ireo.
Farany, mamporisika anao izahay hisoratra anarana amin'ny Fisoratana anarana amin'ny mpitsangatsangana avy amin'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny any Espana mba ho mora hita raha sendra olana. Ary izay, indray mandeha any Nepal, misotro fotsiny ianao rano tavoahangy ary izany aza manandrana ny voankazo tsy voasasa na ny salady hialana amin'ny antso "Fivalanan'ny mpitsangatsangana".
Ho famaranana, firenena tsara tarehy manolotra anao i Nepal ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany. Ary koa tsangambato marobe sy gastronomie iray hafa tsy mitovy amin'ny an'ny andrefana. Raha te ho velona ianao fanandramana hafa, mamporisika anao izahay handeha amin'ny firenena Aziatika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Nepal